Moe Cho Thinn October 8, 2008 at 12:01 AM
အဲဒီ ကမ္ဘာသစ်ကို ချိုသင်းလဲ အတူလိုက်ပါရစေနော်။
ဇနိ October 8, 2008 at 8:40 PM
khin oo may October 8, 2008 at 10:19 PM
ဒီလိုစဉ်းစားရေး မှတော. ကြာပြီပေါ့ သဘော ပေါက် ပါပြီး ဖတ်တုံးဘဲ ၂ ခါရှိပြီး နားလည် သလိုလိုဘဲ ရှိသေးတယ်။
myatnoe October 8, 2008 at 10:59 PM
တန်ခူး October 9, 2008 at 8:42 PM
သက်ဝေရေ… ကမ္ဘာသစ်တဲ့လား… စိတ်ကူးလေးကချိုလိုက်တာ… … ကမ္ဘာသစ်ထဲခေါ်သွားပေးတဲ့ ဒီပို့ စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးနော်…
nu-san October 10, 2008 at 11:50 AM
ကျနော်လည်း လိုက်မယ်လေ.. လောလောဆယ်တော့ ဘယ်ဖြစ်ဖြစ် ထွက်သွားချင်နေတာပဲ သိတော့တယ်..။
tg.nwai October 10, 2008 at 9:58 PM
ဟုတ်တယ် သက်ဝေရေ.. ဆူညံလွန်းလို့ ဘယ်နားသွားနေရမလဲ စဉ်းစားနေတာ.. သက်ဝေရဲ. ကမ္ဘာသစ်..အတွက် ကျေးဇူးပါ။
pandora October 10, 2008 at 11:54 PM
စိတ်ကူးထဲမှာ ခဏပဲဖြစ်ဖြစ် ကမ္ဘာသစ်ကို ထွက်ပြေးလို့ရရင် တော်သေးတာပေါ့ မသက်ဝေ..
သက်ဝေ October 28, 2008 at 10:10 AM
ချိုသင်း... သွားစို့အတူ...။
နိနိ... ဟုတ်တယ် စိတ်တွေကို အရင်ပြောင်းကြဖို့ တော့ လိုမယ်နော်...။
မမခင်ဦး... ရိုးရိုးလေးဘဲ တွေးစေချင်...။
မြတ်နိုး... ဘယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ်လိုက်လို့ ရ... များလေ ကောင်းလေ...။
တန်ခူး... စိတ်ကူးထဲမှာတော့ ချိုချင်သလောက် ချိုနိုင်တယ် မဟုတ်လား...။
နုရေ... အတူတူ သွားကြစို့ လေ...။
နွယ်... ဟုတ်တယ်... ဆူညံသံတွေကို သိပ် စိတ်ပျက်နေမိတာ...။ ဒါကြောင့်လဲ ဒီကမ္ဘာသစ် ကို ရေးဖြစိသွားတာ...။
ပန်ပန်... စိတ်ကူးထဲမှာတော့ ထွက်ပြေးနေမိတာ အကြိမ်ကြိမ်...။
လက်တွေ့ မှာတော့.... တာဝန်တွေ ၀တ္တရားတွေ အများကြီးနဲ့ဒီချည်တိုင်က မခွာနိုင်သေး...။
ကမ္ဘာသစ်ကို အားပေးကြသူများကို ကျေးဇူးတင်ရင်း ကိုယ့်လို လူတွေရှိနေသေးပါလားဟု ၀မ်းမြောက် အားတက်လျက်...။